Matio 5, Baiboly Katolika (MBC) | The Bible App
B. FAMPIANARANA NY VAOVAO MAHAFALY
(Jereo Lk 6,20-23)
1Ary nony nahita ny vahoaka i Jesoa, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany, 2ka niloa-bava Izy nampianatra azy, nanao hoe: 3«Sambatra ny mahantra am-panahy#5,3 Ny mahantra am-panahy, dia izay sady tsy miraiki-po amin’ny vola aman-karena no tsy miavonavona; fa manana, mahay mamehy teny; tsy manana, mahay mandefitra., fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany. 5Sambatra izay mitomany, fa halàna alahelo. 6Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy. 7Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy. 8Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy. 9Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy. 10Sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny, fa azy ireo ny fanjakan’ny lanitra. 11Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangaina lainga amin’ny ratsy rehetra noho ny Amiko; 12mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra, satria tahaka izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.»
Fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao
(Jereo Mk 9,49; Lk 14,34-35)
13Ianareo no fanasin’ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, hatao ahoana no fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy, fa dia hariana any alatrano hohitsahin’ny olona.
(Jereo Lk 11,33; Mk 4,21; Lk 8,16)
14Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao: tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, 15ary tsy misy olona mampirehitra jiro, ka mametraka azy ao ambanin’ny vata famarana, fa eo ambonin’ny fanaovan-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. 16Aoka hazava eo imason’ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hanomezany voninahitra ny Rainareo izay any an-danitra.
Fanarahana ny Lalàna
17Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny Lalàna#5,17 Ny Lalàna, dia ny Boky dimin’i Môizy, ary ny Mpaminany kosa dia ny Boky sisa rehetra. - Tsy nandrava izay rehetra voalaza sy voadidy ao i Jesoa Kristy, fa vao mainka nahatanteraka sy nahalavorary azy aza., na ny Mpaminany; tsy tonga handrava Aho, fa hanatanteraka. 18Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa mandra-pahalevon’ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin’ny Lalàna na dia i iray#5,18 Na dia i iray. Izany hoe, na dia izay kely indrindra aza toy ny i sy ny tendrin-tsoratra izay zavatra kely indrindra amin’ny Soratra. na tendrin-tsoratra iray akory aza, mandra-pahatanterak’izy rehetra. 19Koa amin’izany, izay handika ny anankiray amin’ireo didy madinika indrindra ireo, ka hampianatra ny olona toy izany, dia ho kely indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay hanatanteraka sy hampianatra ireo kosa dia ho lehibe amin’ny fanjakan’ny lanitra.
Fahamarinana vaovao ambony noho ny fahamarinana taloha
20Fa lazaiko aminareo, fa raha tsy lehibe#5,20 Raha tsy lehibe. Ny ara-bakiteny fotsiny sy ny momba ny ivelany indrindra no nikezahan’ireo mpanora-dalàna sy Farisianina, fa izay tena hevitry ny didy sy ny fahamarinana ao am-po dia tsy nasiany raharaha. noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra akory ianareo.
21Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona, ary izay hamono olona dia hohelohina amin’ny fitsarana.#5,21 Ny fitsarana. Fitsarana ambany io, fa ny Sanedrìna no fitsarana tokana sy ambony indrindra tao Jerosalema. 22Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia hohelohina amin’ny fitsarana; ary izay hanao aminy hoe Raka#5,22 Raka, kely ati-doha, marivo salosana. Foka (nabal amin’ny teny hebrio) faran’izay ratsy, mpandà an’Andriamanitra. Gehena, na gehen’afo, fanarian-jezika nirehetan’ny afo lalandava ka raikitra ho anaran’ny afobe. Tsy ny mamono ho faty ihany, hoy ny Tompo, no voarara, fa na dia ny fahatezerana sy ny teny fanaratsiana aza, izay mahadiso arakaraka ny halehibeny., dia hohelohina amin’ny Sanedrìna; ary izay hanao azy hoe Foka dia hohelohina any amin’ny gehen’afo. 23Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin’ny ôtely ianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, 24dia avelao eo amin’ny ôtely aloha ny fanatitrao, ka mandehana mihavana amin’ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray.
(Jereo Lk 12,58-59)
25Mihavàna faingana amin’izay manana ady aminao, dieny samy mbola eo an-dalana ianareo, fandrao atolotr’izay manana ady aminao amin’ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa hanatitra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao an-tranomaizina ianao. 26Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany.
27Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe. Aza mijangajanga 28Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra hijery vehivavy ka maniry azy, dia efa nijangajanga taminy tao am-pony sahady.
(Jereo Mt 18,8-9)
29Koa raha ny masonao ankavanana no manafintohina#5,29 Manafintohina. Ny zavatra rehetra mety hitarika hanota no lazaina hoe fanafintohinana amin’ny Testamenta Vaovao. anao, dia esory izy ka ario lavitra anao, fa aleo zavatra iray amin’ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin’ny gehen’afo. 30Ary raha ny tananao ankavanana no manafintohina anao, dia tapaho ka ario lavitra anao, fa aleo rantsam-batana iray amin’ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin’ny gehen’afo.
(Jereo Mt 19,9; Mk 10,11-12; Lk 16,18; 1Kôr 7,10-11)
31Ary koa efa voalaza hoe: Na iza na iza hisaotra ny vadiny, dia aoka hanome azy ny taratasy fisaorana. 32Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misao-bady, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, dia mampijangajanga azy; ary izay hanambady ny voasaotra dia mijangajanga#5,31-32 Ao amin’ny toko 19, no izahavana izany..
33Ary efa renareo koa fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mianiana tsy to, fa efao amin’ny Tompo ny fianiananao. 34Fa Izaho kosa milaza aminareo tsy hianiana akory#5,34 Aza mianiana. Ny mianiam-poana tsy marina sy tsy misy antony no raran’i Jesoa-Kristy, fa tsy ny mianiana marina raha misy antony., na amin’ny lanitra, fa seza fiandrianan’Andriamanitra izy; 35na amin’ny tany, fa fandiavan’ny tongony izy; na amin’i Jerosalema, fa tanànan’ny Mpanjaka lehibe izy; 36na amin’ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. 37Fa aoka ny teninareo ho eny, dia eny; tsia, dia tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ilay ratsy.
(Jereo Lk 6,29)
38Efa renareo fa voalaza hoe: Maso efai-maso, nify efai-nify. 39Fa Izaho kosa milaza aminareo tsy hamaly ratsy#5,39 Tsy hamaly ratsy. Raran’i Jesoa Kristy tsy hamaly ratsy isika, ary asainy mandefitra raha misy maneso na manaratsy. akory; fa raha misy mamely tehamaina ny takolakao ankavanana, dia atolory azy koa ny ilany; 40ary raha misy te hiady aminao mba hahazahoany ny akanjonao, dia afoizo ho azy koa ny lambanao; 41ary raha misy manery anao hiaraka aminy arivo dingana, miaraha aminy roa arivo. 42Omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaoza-mihataka izay te hisambotra aminao.
(Jereo Lk 6,27-36)
43Efa renareo fa voalaza hoe: Ho tia ny namanao ianao ary hankahala ny fahavalonao. 44Fa Izaho kosa milaza aminareo: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin’izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika sy manendrikendrika anareo; 45mba ho zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo, dia Ilay mampiposaka ny masoandrony amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina. 46Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valisoa ho azonareo? Moa va na dia ny Poblikanina#5,46 Ny Poblikanina, dia ny mpamory hetra, ka noho izany sy noho ny fanaovany tsy an-drariny dia tsy tian’ny Jody mainty, sady nampitoviny amin’ny mpanota sy ny Jentily. aza tsy manao izany koa? 47Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no mihoatra amin’ny ataonareo? Moa na dia ny Jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? 48Koa aoka ho lavorary ianareo tahaka ny fahalavorarian’ny Rainareo izay any an-danitra.
Исследуйте Matio 5 стих за стихом